सोनिकाले सबैथोक दिँदा पनि विहे गर्न नमान्ने को हुन् ? (भिडियोसहित) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/सोनिकाले सबैथोक दिँदा पनि विहे गर्न नमान्ने को हुन् ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चर्चित गायक राज सिग्देल र प्रीति आलेको समधुर आवाज रहेको गीत बजारमा आएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान र घरमा एक्लै भएकी श्रीमतीको कथा देखाउन खोजिएको ‘फुलको थुङ्गाले, सक्छौ भने मुर्सादेउ फुलको थुङ्गाले, काटिदेउ निरमाया घोच्यो मलाई तिम्रो जुङ्गाले’ बोलको गीतमा शब्द÷संगीत डीआर सुजनको रहेको छ ।
सो गीतमा कलाकारहरू डीआर सुजन, सोनिका रोकाया, नविना सिलवाल, सुरवीर पण्डित, अन्जु कार्की र अर्जुन कार्कीको मिठो अभिनय पनि रहेको छ । भिडियोमा सोनिकालाई श्रीमान विदेश गएकी महिलाका रूपमा देखाइएको छ । श्रीमान विदेशमा रहँदा गाउँका अरू नै केटासँग उनको प्रेम सम्बन्ध रहेको देखाउन खोजिएको छ ।
‘आउँछौ दिनकैं गर्दैनौं विहे नि, खुःशी हुन्नौं सबैथोक दिए नि’ बाट सुरु भएको गीतको अन्त्य ‘बैंस जोवन अर्कैसँग साटियो, तिम्लाई कुर्दा ४० अ‍ैं काटियो’ मा हुन्छ । भिडियोमा सोनिकाको श्रीमानको भुमिकामा सुरवीर पण्डित रहेका छन् । सम्पादन विकास ज्ञवालीको रहँदा सिनेम्याटोग्राफर रेशम दर्लामी रहेका छन् ।
फुलको थुङ्गाको निर्माता सुजन शर्मा रेग्मी रहेका छन् भने निर्देशन डीआर सुजनको रहेको छ । डीआर सुजनको आफ्नै युट्यब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको गीतलाई दर्शकहरूले राम्रै माया दिइरहेका छन् ।